अक्षयकुमारको ‘सूर्यवंशी’ले हलमा फर्कायो नेपाली दर्शक ! – Online Khabar 24
अक्षयकुमारको ‘सूर्यवंशी’ले हलमा फर्कायो नेपाली दर्शक !
November 9, 2021 by admin admin
काठमाडौं : नेपालमा को’रो ना संकट सुरु भएसँगै संकटमा परेका चलचित्र हलमा दर्शक फर्किन थालेका छन्।
दुई वर्षपछि खुलेका हलमा दर्शक फर्काउने सहारा भने बलिउड मुभीको लिनुपरेको छ।असोज २१ देखि खुलेका हलमा लागेको नेपाली चलचित्र ‘डाँडाको बरपिपल’ले पानी समेत पिउन नसकेपछि अन्य निर्माता ड’राएका थिए।
तर नेपाली चल चित्रकर्मीहरु डराइ रहेको अवस्थमा शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको रोहित सेट्टी निर्देशित ‘सूर्यवंशी’ ले दर्शकलाई हल सम्म लैजान सफल भएको छ ।
को’रो ना महामारीका कारण दोस्रो पटक पाँच महिना बन्द भएका सिनेमा हल असोजमा खुले पनि नेपाली चलचित्र लाग्न सकेका थिएनन्। दशैंमा ठूला फिल्म नआउने भएपछि शोभित बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘डाँडाको वर पिपल’ फूलपातीमा रिलिज भएको थियो। तर, यो फिल्मप्रति दर्शकको चासो नै गएन।
‘डाँडाको बरपिपल’ को चल्नै नसकेपछि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेका निर्देशकहरू पन्छिरहेका बेला हिन्दी फिल्मले दर्शक तानेको हो । तिहारको मौकामा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले राजधानी र बाहिरका मल्टिप्लेक्सहरुमा दर्शक तानेको छ । शुक्रबार राजधानीका हलहरुमा सूर्यवंशी हेर्ने दर्शकको भीड नै लागेको थियो।
नेपालका दर्शकमाझ पनि प्रतिक्षीत ‘सूर्यवंशी’ देशभर सयवटा सिनेमा घरमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको हो। जसलाई नेपाली दर्शकले राम्रो रेस्पोन्स गरे। यसअघि कुनै पनि विदेशी फिल्म नेपालका सयवटा हलमा एकसाथ लागेका थिएनन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो मल्टीप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले देशभरका १० मेजर स्टेशनमा कूल ५८ शोज यो फिल्मलाई दिएको थियो ।
यस लाई राजधानीका मल्टीप्लेक्सहरु वान् सिनेमाजले ६ शो, विग मुभिजले ११ शो, कीर्तिपुर सिनेप्लेक्सले ३ शो, एफक्युब सिनेमाजले १२ शो, क्यूज सिनेमाजले ७ शो, आइएनआई सिनेमाजले ९ शो, विएसआर मुभिजले ७ शो र सिडिसी सिनेमाजले ७ शोज दिए का थिए।
यो फिल्म वितरक मनोज राठीको समूहले एक करोडभन्दा बढी तिरेर ल्याएको हो । फिल्ममा अक्षय कुमार, क्याटरिना कैफको मुख्य भूमिका छ। अतिथि भूमिकामा अजय देवगण र रणवीर सिंह पनि छन्। कोरोनाका कारण यो फिल्म प्रदर्शनमा आएको थिएन। यो खबर हाउसबाट साभार गरियको हो ।
Prevटिकटक लाइभ बाट पुण्य गौतमले २० दिनमै १८ लाख भन्दा बढी कमाए (हेर्नुस् भिडियो)
nextचाइनिज युवक र नेपाली चेलीको निकै लोभ लाग्दो प्रेम र विवाह,फेसबुकबाट लगाएको प्रेमले विवाहसम्म लग्यो (भिडियो हेर्नुस्)
५ सय चोरेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस्
पिकनिक खान गएका मेयरका छोराको पिकनिक स्थलमै मृ’त्यु !
यो हो कहिल्यै जमिन नटेक्ने चरा जो २६ बर्ष बाँच्छ ! कसरी ? जान्नुस
यिनै हुन् हिजो बिहान मृ’त्यु भएका २२ वर्षका वासु बस्नेत, मोटरसाइकललाई आईरहेका उनलाई अचानक ….